PSJTV | कसरी बसाल्ने पढ्ने बानी ?
पठनमा रमाउन त्यसतो विधि पढन्ते भइरहनु पर्दैन। तपाईं पठनमा रमाउन सक्नुभयो भने यसले कुनै विषयमा जनकार मात्र बनाउँदैन, गर्न आँटेका काममा पनि सहयोग पुर्याउँछ।
पठनले हाम्रो सोचाई र चिन्तनलाई फराकिलो बनाउँछ। यो जानकारी आजको शुक्रबार साप्ताहिकले छापेको छ। हिजोआज अधिकांशको एउटै गुनासो हुन्छ, पढ्न त मन छ तर के गर्नु? फुर्सदै हुन्न।
साँच्चिकै हामीलाई पढ्न मन छ भने केही कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने पढ्नको लागि समय छैन भनिराख्नु पर्दैन। एकैचोटी धेरै पढ्न खोज्दा सकिँदैन। त्यसैले थोरैबाट सुरुवात गर्नुस्। पुस्तक पढ्ने बानी नभएकाले आज ५० पाना पढिसक्छु भनेर प्रतिवद्धता गर्न सकिन्छ।